Faah faahin:- Ciidamo gadoodsan oo saakay la wareegay xarunta wasaaradda gaashaandhiga – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Ciidamo gadoodsan oo saakay la wareegay xarunta wasaaradda gaashaandhiga
Faah faahin dheeraad ah ayaa laga helayaa ciidamo gadoodsan oo saakay la wareegay xarunta wasaaradda gaashaandhiga ee magaalada Muqdisho, kuwaas oo in muddo ah xanibay howlihii xaruntaasi ka socday.
Ciidamadaasi gadoodsan oo la sheegayo inay ka tirsan yihiin kuwa militeriga Soomaaliya ayaa waxay ka cabanayaan mushaar la’aan dhowr bilood ah oo aan la siinin.
Saraakiil ka tirsan ciidamada Soomaaliya oo ku baxay ciidankaasi gadoodsan ayaa markii dambe ku qanciyaay inay dib ugu laabtaan xerooyinkoodi, iyadoona loo balan-qaaday in la siin doonno mushaaraadka ka maqan.
Ciidamada dowladda iyo kuwa maamul goboleedyadda dalka ayaa la sheegayaa in muddo billooyin ah aanay wax mushaaraad ah la siinin, waxayna taasi keeneysaa in badankooda ay sameeyaan gadood ay kaga cabanayaan mushaar la’aantaas.
Si kastaba ha ahaaatee, waa markii labaad oo ciidamo ka tirsan militeriga Soomaaliya ay gadood ka sameeyaan magaalada Muqdisho, tan iyo markii xilka madaxweynaha Soomaaliya loo doortay Maxamed C/laahi Farmaajo.